USony ujoyina uluhlu lwabavelisi abaza kusungula ii-smartphones ezingenamda | Iindaba zeGajethi
Isamsung yayingumvelisi wokuqala wokuphehlelela i-terminal enamacala asecaleni emacaleni kwaye ukuza kuthi ga namhlanje, iyaqhubeka nokusebenza kwikamva lezikrini ze-smartphone, izikrini eziguqukayo eziya kusivumela ukuba sisonge i-terminal. Ukuphehlelelwa kwe-S6 Edge, ukufumana ukugxekwa kunye nokudumisa ngomlinganiso olinganayo, kodwa kufuneka kuqatshelwe ukuba olu hlobo lwescreen kungekudala luya kuba likamva lee-smartphones, ewe, njalo kwaye xa befumana umdlalo ukuze ukongeza ekubeni mhle ngobuhle babonakalise into eluncedo kakhulu kumsebenzisi.
Umvelisi wokugqibela obonakala ngathi unawo engqondweni yokwazisa i-smartphone enescreen esihlala kwindawo engaphambili yesiphelo yiSony. U-Sony ushiye uluhlu oluphezulu kunyaka ophelileyo, eshiya ecaleni uthotho lwe-Z, kwaye engena kwicandelo eliphakathi kwinqanaba eliphakamileyo nge-X uluhlu, okwangoku okwangoku kubonakala ngathi que ikuzisela izibonelelo ezininzi ngakumbi kunoluhlu lwangaphambili lwe-Z.
Kuyabonakala ukuba kwaye ngokomfanekiso okhutshiweyo, uSony uza kusebenza i-smartphone apho phantse yonke ngaphambili, Ngaphandle kwenxalenye esezantsi, iya kuba siscreen, njengoko sinokubona kumfanekiso ophambili kweli nqaku. Oku kuvuza kufuneka kuthathwe ngqolowa yetyuwa kuba inokuba kuphela ngumxholo okhutshwe kwi-Weibo ngaphandle kwesiseko.
Njengoko sinokubona emfanekisweni, imiphetho esecaleni kwesikrini iya kuba ngumjikelo wokubonelela ngesiphelo ngaphandle kwecala okanye isakhelo esiphezulu. Kodwa ayizukuba kuphela kwento entsha, kuba njengoko sinokubona kumfanekiso ofanayo, i-terminal iya kuthi isinike iikhamera ezimbini zangasemva, zilandela imfashini yabavelisi abaninzi, ukuze sikwazi ukuthatha iifoto ezikumgangatho ophezulu zidlala ngokufiphala yezinto ezifotyiweyo, njengoko kunjalo nge-iPhone 7 Plus.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » USony ujoyina uluhlu lwabavelisi abaza kuphehlelela ii-smartphones ezingenamda